Estradiol Valerate ntụ ntụ (979-32-8) & Emeputa ụlọ ọrụ
/ ngwaahịa / Hormones / Estradiol Valerate ntụ ntụ
Rating: SKU: 979-32-8. Category: Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Estradiol Valerate ntụ ntụ (979-32-8), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Estradiol ntụpọ ntụpọ bụ hormone estrogen nwanyi. Ọ na - arụ ọrụ site n'iji ọgwụ estrogens na - edochi anya na nwanyị nke na - enweghị ike ịmịpụta estrogen.It na - arụ ọrụ maka ọrịa cancer prostate site n'ịgbalite iyi egwu nke ụmụ nwoke.
Estradiol Valerate ntụ ntụ video
Raw Estradiol Ezigbo ntụ ntụ bụ isi ihe
aha: Estradiol Valerate
Usoro Molecular: C23H32O3
Molekụla arọ: 356.4984
Raw Estradiol Ntinye uzuzu eji eme ihe na steroid
Aha njirimara: estradiol valerate, ess-tra-DIE-ole (CAS 979-32-8)
Aha aha: Delestrogen
Raw Estradiol Valerate ntụ ntụ Usage
Jiri estradiol dị ka dọkịta gwara gị. Lelee akara na ọgwụ ahụ maka ntụziaka ntụzi kpọmkwem. Lelee akara na ọgwụ ahụ maka ntụziaka ntụzi kpọmkwem.
Ịdọ aka ná ntị na Raw Estradiol Valerate ntụ ntụ
Ụfọdụ ọnọdụ ahụike nwere ike imekọrịta na estradiol. Jụọ onye nlekọta ahụike gị ma ọ bụrụ na estradiol valerate (CAS 979-32-8) nwere ike iji ọgwụ ndị ọzọ ị na-emekọrịta. Lelee onye nlekọta ahụike gị tupu ịmalite, kwụsị, ma ọ bụ gbanwee dose nke ọgwụ ọ bụla.
Ọ bụ onye nlekọta ahụ ike na - edozi ma na - echekwa ihe dị na Estradiol valerate. Ọ bụrụ na ị na-eji estradiol valerate n'ụlọ, na-echekwa estradiol valerate dịka onye na-enye gị ọgwụ na-elekọta ma ọ bụ onye nlekọta ahụike. Debe zoro neradiol site na iru ụmụaka ma pụọ ​​na anụ ụlọ. Onye ọrụ nlekọta ahụike na-edozi ma na-echekwa ya. Ọ bụrụ na ị na-eji estradiol valerate n'ụlọ, na-echekwa estradiol valerate dịka onye na-enye gị ọgwụ na-elekọta ma ọ bụ onye nlekọta ahụike. Nọgidenụ na-ezu ike na nkwonkwo nke ụmụaka na ụmụ anụmanụ.
Raw Estradiol Valerate ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Estradiol Valerate ntụ ntụ (CAS 979-32-8) sitere na AASraw